Dulmar Arimaha Dagaalka Tigre iyo Aragtida Aduunka (Warbixin) – Idil News
Dulmar Arimaha Dagaalka Tigre iyo Aragtida Aduunka (Warbixin)
Los Angeles, California, Nov 15, 2020
Waa dagaal ka dhashay kala aamin-baxa iyo qowmiyado kala fogaaday, taasi oo keentay en Tirgregu ku dhago nidaamkii 30 soo jiray oo ahaa mid qomiyaduhu awooda iskxunkun leeyihiin, iyo Axmaaro oo Abiy ku jujuubtay in uu nidaamkaasi wiiqiyo.
Itoobiya waxa ku dhowdahay meel aan laga soo noqon kareyn (point of no return), sidaas waxa qoray Mail Guardian oo dalka Ingriiska ka soo baxa.
Askar badan oo ka tirsan Liyu Boliska Axmarada ayaa ku dhintay ka dib markay isku dayeen in ay qabsadaan goobo Axmaradu asal ahaan sheegtaan.
R/W Abiy oo isbadal aan habeysnay ku sameeyey maamulka Axmaara hadeerna tafaraaruq ku keenay maamulka gobolkaas ayaa laga baqayaa in kooxaha Axmaarada mayal adagi R/W Abiy ku kacaan (Waxa sidaas qorey Foreign Policy Magazine).
Taageerada milateri iyo sirdoonka raacsan R/W Abiy oo gaabis noqonaya ay sababay in tiro yar oo Axmaaro ahi ku wareegsanaato. Hadii saraakiishasi isku rogaan R/W Abiy, Itoobiya waji kale ayey gali doontaa (Foreign Policy Magazine).
Tigray sadex furinood ayey hadeer dagaalka kaga jirtaa (Axmara, Canfer, iyo Eriteriya, waxa dheeri ku ah ciidamada Itoobiya). Ama wey ku hongoobi ama wey ku najixi oo afgambi ayay Issaias ku keeni doontaa. Wayse adagtay sida Tigre arinka uga dabaalan karto.
Dhinaca ay Suudaantu raacdo ayaa laga yaabaa in guudsho raacdo. Khaliijka iyo Baxrain ayaa laga yaabaa in ay cadaadis saaraan Sudan si ay R/W Abiy dhinaciisa ula safataan. Hase yeeshee, dhul-beereedka sadex geesoka ah ee Fashqa (Fashqa Triangle) oo Axmaaradu sheegato ayaa gacanta Sudaan ku jira. Sudani waxay rabtaa in loo sharciyeeyo xadka labada wadan u dhexeeya oo lugu jaangooyo heshiiskii 1902. Hashiiskaasi oo dhanaca kalena Itoobiy ka eexanaya marka laga eego arinta biyaha Niilka. Shir uu dhawaan Abiy laqaatay madaxda Sudaan waala isku Afgran waayey. R/W Abiy innaba ma sameyn karo arintaas. Wuu ku guban.
Wargeyska afka dheer ee Economist layidhaa iyo The New York Times waxay labaduba soo hadal qaadeen caqabada hortaagan R/W Abiy sida uu isu waafajin lahaa Gudoonka Shahaadada Nabada (Nobel Prize) iyo Dagaal Cir iyo Dhul ah u uku qaado Ismaamul Gobol oy caruur iyo maatiba ku waxyeeloobi karaan
Sputnik International oo laga leeyahay Ruushka xafiisyana ku leh New York, Washington, London iyo xurumo kale oo Yuruk ka tirsan ayaa ku tilmaamay hindisaha dagaalka R/W Abiy maleegay mid u uku rabo AWOOD URURSI, waa sida hadalka loo dhige.
Christian Science Monitor (waa wergeys da’weyn) iyo Royal African Society waxa labaduba isku raaceen in dagaalka Woqooyiga Itoobiya ka socdaa uu qayb ka yahay hindisaha iyo go’anka R/W Abiy ku rabo in uu Itobiya ku soo celiyo Dawlada awoodu ku urursantahay dawlada dhexe (unitary state).
W/Q: Feysal Rooble